UJali usefuna ukulishiya iqembu laphesheya | News24
UJali usefuna ukulishiya iqembu laphesheya
Cape Town – Umdlali weBafana Bafana ogijima esiswini u-Andile Jali angase ayishiye ikilabhu yaseBelgium iKV Oostende, ngokusho kwalowo obhekelele izindaba zakhe, uMike Makaab.
Lo mdlali oneminyaka engu-27 ubudala ubambe iqhaza elibalulekile kuleli qembu eligijima kuBelgian Pro League, walisiza ukuthi liqede endaweni yesihlanu kwiligi, laphinde lathola nesikhala sokudlala emidlalweni yokuhlungela umqhudelwano weChampions League.
OLUNYE UDABA:Umnikazi weqembu lePSL usabisa ngokubopha abathi liyadayisa
Kodwa-ke njengoba lo mdlali owayedlala ku­-Orlando Pirates esengene ezinyangeni ezingu-12 zokugcina zokuphela kwenkontileka yakhe kule kilabhu, uMakaab usetshele i-website yeSowetanLIVE ukuthi kunamakilabhu ase-Europe kanye naseNingizimu Afrika anentshisekelo yokusayina lo mdlali.
“Sibheke ukuhamba kwakhe,” umphathi kaJali, uMakaab, ubeke kanjalo.
“Sesike sathintwa futhi sekube nentshisekelo e-Europe naseNingizimu Afrika.
“Kodwa uma kwenzeka ebuyela eNingizimu Afrika kuzomele kube yisivumelwano esinemali ngoba manje usengumdlali onesipiliyoni osedlala njalo eqenjini lesizwe.”
Okunokuthi ilahlekelwe ngokuthi ahambe bese ejoyina elinye iqembu mahhala, i-Oostende ingase ikhethe ukumdayisa uJali, nokwasekusele kancane nje ukuthi aphothule isivumelwano neqembu eligijima ku-English Championship, iLeeds United, ngokuqala konyaka odlule.